मंगलबार, श्रावण १९, २०७८ १०:४८:०२ युनिकोड
निषेधाज्ञाका कारण अधिकांश नेपाली घरभित्रै सीमित छौं। कोरोना भाइरसबाट संक्रमितहरू पनि धेरै घरमै आइसोलेसनमा बसेका छन्। घामसँग साक्षात्कार हुन पाइरहेको छैन। यसले शरीरमा कतै भिटामिन ‘डी’को कमी त भइरहेको छैन रु चिकित्सकीय भाषामा ‘भिटामिन डी डिफिसेन्सी’ भनिने यो समस्याले प्रायःलाई प्रभावित पारिरहेको डाक्टरहरू बताउँछन्।
घाममा केही बेर बसेपछि पाइन्छ, सूर्यको अल्ट्राभायोलेट बी किरण। यही किरण नांगो छाला हुँदै शरीरभित्र प्रवेश भयो भने भिटामिन डी डिफिसेन्सीको अभाव पूर्ति हुन्छ। सूर्य (घाम)को किरण नांगो छालाद्वारा भित्र प्रवेश गरेपछि कोलेस्ट्रोलमा पुग्छ। त्यसपछि भिटामिन डीमा परिवर्तित हुन्छ। घामको किरण शरीरमा प्रवेश गर्ने गरी बस्यो भने निःशुल्क भिटामिन डी प्राप्त गर्न सकिन्छ। शरीरभित्र घाम प्रवेशपछि विभिन्न राशायनिक प्रतिक्रिया भई शरीरलाई चाहिने भीटामिन डी प्राप्त हुन्छ। बुढ्यौली लागेसँगै छालाका छिद्रहरूले घामको किरण पर्याप्त ग्रहण गर्न सक्दैन। फलस्वरूप, शरीरमा ‘भिटामिन डी’ को अभाव हुन्छ।
डा. रेग्मीका अनुसार सूर्यको प्रकाश वा खानपानबाट नै भिटामिन डी ग्रहण गर्नुपर्छ। ‘अहिले त सप्लिमेन्ट (पूरक)का रूपमा भिटामिन डीको चक्की खानेहरू धेरै छन्’, डा. रेग्मी भन्छन्। डा. गुरुङका अनुसार कोठामा मात्र बसिरहनुहुँदैन। घरबाहिर निस्कने वा छतमा गएर १०–१५ मिनेट घाम ताप्नुपर्छ। घामबाट पनि भिटामिन डी पाउन सकिन्छ।
सिधै ट्याब्लेट वा जिंक सेवन गर्नुभन्दा हर्बल मेडिसिनको उपयोग गर्न सकिन्छ। अमला, च्यवनप्रास, अश्वगन्धा सेवन गर्दा शरीरलाई चाहिने भिटामिन डी पाउन सकिन्छ।’ होम आइसोलेसनमा बसेका वा अन्य व्यक्तिले दैनिक रुटिन अनुसार खानपान र नियमित व्यायाम गर्नुपर्ने डा. उपाध्यायको सुझाव छ।
प्रकाशित मिति: शनिवार, जेठ २९, २०७८, ०९:१३:००